Ụlọ ọrụ na-emepụta ụlọ ọrụ China Breathable Roofing ShiningPlast
Ebe ọ bụ na ụlọ anyị kwesịrị iku ume. Ya mere, a ga-enyekwu ọtụtụ ihe ụlọ maka ihe iku ume iji gbochie mmebi nke mmiri ma ọ bụ iru mmiri ọzọ.
Ibu ibu: 80-200gsm
Ihe: SBPP + Oghere Usoro
Ozo: (3.3ft ~ 5 ft) 1-1.5m
Mpịakọta: 50m (16 ') ~ 100m (328') ma ọ bụ ahaziri ahaziri
Ike ọdụdọ: 90-350N (EN ọkọlọtọ)
Obibi akwụkwọ: 1-4 agba dị
Ọtụtụ mba Europe anabatala akpụkpọ ahụ nke ikuku na-eku ume ogologo oge. Kedu ihe na-enye ohere ka iru mmiri dị ọzọ pụọ, ma gbochie mmiri ịbanye.
A na-emepụta nkwụcha ikuku na-enwu gbaa site na ịgbaso usoro a iji jide n'aka na mmiri vepo na-agba ọsọ nke ọma. Ihe ncheta ShiningPlast Breathable abụghị hydrophilic iji gbochie mmiri ịbanye.
Ngwurugwu na-acha ọkụ na-acha anwụrụ ọkụ na-adịkwa mma ma sie ike n'ihi akwa a na-eme site na ọtụtụ ihe mejupụtara.
·Ike na inogide
Ngwurugwu na-acha ọkụ na-acha anwụrụ ọkụ na-adịkwa mma ma sie ike n'ihi akwa a na-eme site na ọtụtụ ihe mejupụtara. Anyị ghọtara na ịdịte aka na ihe na-adọwa ihe bụ ihe dị mkpa iji gbanye mkpọrọgwụ n'oge nrụnye.
SBPP n'usoro dị ka isi ihe owuwu na-ebelata oke ibu n'ogo oke. Ọ dị mfe oburu.
·Ihu igwe na-eguzogide
ShiningPlast membre ụlọ nke na-eku ume bụ nke na-abụghị hydrophilic ma sie ike n'oge ihu igwe adịghị mma. Site na iji ọgwụgwọ UV dị ukwuu, ọ ga - echebe elu ụlọ gị n'oge owuwu ma ọ bụ site na nnukwu ikuku.
.Mgbali ume (Oke SD di ala)
Dị ka afọ nke ahụmịhe mmepụta na-enweghị nke a kpara akpa. Anyị na-amị ọ bụghị nanị na-eku ume ma ọ na-enye ume ndụ. Anyị nwere ule WVT anyị nke na-egosi iku ume erutela nnukwu uru (ọnụahịa SD dị ala)
Nke gara aga: Kechie 2-Ply House
Osote: Nnukwu reatlọ Na-Ewu Ewu